काठमाडौंका सीडीओलाई चिकित्सकको प्रश्न– उपत्यकाको कोरोना रातिमात्र सर्ने हो? – Health Post Nepal
काठमाडौंका सीडीओलाई चिकित्सकको प्रश्न– उपत्यकाको कोरोना रातिमात्र सर्ने हो?
२०७८ भदौ ६ गते १२:०७
सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई कोरोना संक्रमणको ‘रेड जोन’ मा राखेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासनले गत साउन २८ गतेदेखि राति ८ बजेपछि सवारीसाधन सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ।
तर, प्रशासनको सो निर्णयको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। भिडभाड दिउँसो हुने, राजनीतिक दलका प्रदर्शनहरू दिउँसो हुने तर निषेधाज्ञामा कडाइ चाहिँ राति गर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञले प्रश्न गरिरहेका छन्।
‘काठमाडौंमा कोरोना रातिमात्र सर्छ रे!’सामाजिक सञ्जालसहित सार्वजनिक स्थानमा व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले खिल्ली उडाउने सक्रिय छन्। विज्ञहरू पनि आम नागरिकले उठाएको प्रश्नसँग सहमत छन्।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका (टेकु) क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक एवं सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन कोरोना संक्रमण जोमिख कम गर्न रातिको कडाइ प्रभावकारी नहुने तर्क गर्छन्।
‘कोरोना फैलिनको आवतजावत बढी हुनुपर्छ, भिडभाड बढी हुनुपर्छ। यो त प्रष्टसँग थाहा भएकै कुरा हो। संक्रमण त सभा, सम्मेलन, जुलुसबाट फैलिने हो। त्यसैले रातिमात्र कडा गरेर चाहिँ संक्रमण घट्न सक्दैन,’ डा. पुनले भने।
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक दलका विरोध प्रदर्शनहरू दिनहुँ भइरहेका छन्।
अर्कोतिर प्रशासनले सिट क्षमताभन्दा सार्वजनिक गाडी सञ्चालन नगर्न त भनेको छ । तर, गाडीहरूमा पनि उस्तै भिड देखिन्छ।
सरकारले सभा, सम्मेलन, भेला, प्रदर्शन, सार्वजनिक गाडी लगायत भिड बढी हुने क्षेत्रमा कडाइ गनुपर्ने डा. पुन बताउँछन्।
‘उहाँहरूले के सोचेर राति कडा गर्नुभएको हो थाहा भएन, तर कडाइ चाहिँ अहिले भइरहेका प्रदर्शन, सभा, सम्मेलनजस्ता क्षेत्रमा हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने।
यता, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) कालीप्रसाद पराजुली पनि रातिको समयमा गरिएको कडाइ त्यति प्रभावकारी नभएको स्वीकार्छन्। तर, केही हदसम्म भएपनि जोखिम कम भएको उनको दाबी छ।
‘पहिले राति अबेरसम्म पनि खाने, बस्ने, भेला गर्ने गरेको देखिन्थ्यो। तर, अहिले कम्तीमा ८–९ बजे घर पुगिसक्नुपर्छ भनेर अनुशासित बनाएको छ।
‘काठमाडौंमा रातिमात्र कोरोना सर्ने रहेछ’ भनेर आलोचना भइरहेको छ नि! भन्ने प्रश्नमा सीडीओ पराजुली भन्छन्, ‘९–१० बजेभित्र बन्द नगर्दा खाने, बस्ने, भेला हुने प्रवृत्ति बढेकाले हामीले राति कडा गरेका हौँ। रातमा कोरोना लाग्ने दिनमा नलाग्ने भन्ने चाहिँ होइन,’ उनले भने।
पराजुलीका अनुसार मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई गाह्रो हुन देखिएकाले दिउँसोको समयमा कडा नगरिएको हो। ‘राहत पनि नदिने, काम गर्न पनि नदिन्ने भन्ने चाहिँ व्यवहारिक भएन । हामी सबै पक्षको विश्लेषण गरेर अघि बढिरहेका छौँ,’ उनले भने।